Articles - Myanmar Wedding Guide
မင်္ဂလာပွဲကျင်းပဖို့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ထိပ်တန်းဟိုတယ်(၅)ခု
ခမ်းနားလှပပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Tea Reception မင်္ဂလာပွဲကျင်းပဖို့အတွက် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ထိပ်တန်းဟိုတယ်(၅)ခုကို Myanmar Wedding Guide…
Indoor Prewedding အတွက် ရွေးချယ်စရာ Studio များ
1) Peter’s The Bridal Garden Starting from 250,000 MMK…
မေဦး (Magic) မိတ်ကပ်ပါးပါးနဲ့ သဘာဝကျအောင်ပြင်တတ်တဲ့နေရာမှာ မေဦးကတော့ ဆရာတစ်ဆူပါပဲ။ မေဦးရဲ့ ပြင်ဆင်မှုအများစုက ဗိုလ်ဆန်ဆန်နဲ့ ပင်ကိုယ်အလှကို…
Location ။ ။ Outdoor Prewedding မှာ Location က အသက်ပါ။ မြင်တွေ့နေကျ…
ဖိတ်စာဆိုတာ သာမန်အားဖြင့်ကြည့်ရင်တော့ သိပ်အရေးမပါလှဘူးထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းကတော့ မင်္ဂလာပွဲရဲ့ ရှေ့ပြေးအနေနဲ့ အဓိကကျတဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ကနေပါဝင်ပါတယ်။ ဖိတ်စာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး…
သတို့သမီးလေးတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကို အလှဆုံးဖန်တီးပေးမယ့် Makeup Artist ကို ရွေးချယ်ရတာ လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နာမည်ကြီး၊…
တရားရုံးမှာ မင်္ဂလာလက်မှတ်ရေးထိုးတော့မယ်ဆိုရင် သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အချက်လေးတွေကို myanmarweddingguide.com ကဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ လက်ထပ်စာချုပ်ဝယ်ထားပြီး လိုအပ်တာတွေကို လက်ရေးနဲ့ဖြစ်စေ၊ လက်နှိပ်စက်နဲ့ဖြစ်စေ…
Prewedding မရိုက်ခင် ဒါတွေပြင်ဆင်မယ်….
Prewedding ရိုက်မယ့်စုံတွဲတွေအနေနဲ့ ချစ်သူနဲ့အတူ ကြည်နူးစရာပုံလှလှလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အရာတွေကို Myanmar Wedding Guide ကပြောပြချင်ပါတယ်....…
အနုပညာရှင်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေး ဝတ်စုံများ
အနုပညာရှင်တို့ရဲ့ ကျက်သရေရှိရှိ လှပတင့်တယ်တဲ့ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေး ဝတ်စုံလေးတွေ စုစည်းမှုပါ...... ကိုဇေသီဟ+နန္ဒာလှိုင် Photo Credit…
အနုပညာရှင်တို့ရဲ့ ထိုင်မသိမ်း မင်္ဂလာဝတ်စုံများ
အနုပညာရှင်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှာဆင်မြန်းခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာဆန်ဆန် ထိုင်မသိမ်းမင်္ဂလာဝတ်စုံ ဖက်ရှင်များကို စုစည်းတင်ပြလုိုက်ပါတယ်.... ကိုသီဟလွင်+စန္ဒီမြင့်လွင် Photo Credit…
ကုန်ကျစရိတ် သက်သက်သာသာနဲ့ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပမယ်
မင်္ဂလာအသုံးစရိတ်ကိုလျှော့ချချင်တဲ့ မောင်နှံတွေကို Myanmar Wedding Guide ကအကြံပေးချင်တာကတော့... မင်္ဂလာဆောင်ရာသီကို ရှောင်ပါ။ မင်္ဂလာပွဲနဲတဲ့ရာသီမှာဆိုရင် ဟိုတယ်၊…
ထိုင်မသိမ်းလေးဝတ်ပြီး မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ဆိုတာ သတို့သမီးအများစုရဲ့အိပ်မက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးမှာ ထိုင်မသ်ိမ်းလေးကိုမှ ဝတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သတိုးသမီးလေးတွေအတွက် အလှဆုံးဝတ်စုံလေးတွေ ရွေးချယ်ဖို့ သိသင့်သိထိုက်တာလေးတွေကို…
မင်္ဂလာပွဲတက်တဲ့အခါ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ
ဖိတ်စာမှာ ဖိတ်ကြားမခံရတဲ့ လူပိုခေါ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဖိတ်စာမှာ ကိုယ့်နာမည်ပဲ ရေးထားတယ်ဆိုရင် ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲပဲ သွားသင့်ပါတယ်။ မိသားစုလို့ရေးထားမှသာ…
မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးအတွက် ရွေးချယ်စရာ နေရာများ(၂)
ပိဋကသုံးပုံ နိကာယ်စာသင်တိုက် ပိဋကသုံးပုံ နိကာယ်စာသင်တိုက်ရဲ့ ရွှေရတုမင်္ဂလာခန်းမမှာ ဧည့်အယောက် ၂၆ဝ ဝန်းကျင် ဧည့်ခံနိုင်ပာတယ်။ ပွဲထွက်…
မင်္ဂလာပန်းလေးတွေ နောက်ကွယ်က အချစ်ရဲ့အဓိပ္ပါယ်
နှင်းဆီ နှင်းဆီပန်းဟာ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းနဲ့ အလှတရားကို ဖော်ကျူးပါတယ်။ အနီရောင်နှင်းဆီကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက နားလည်လက်ခံထားတဲ့ အချစ်ရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုပါ။ အဖြူရောင်နှင်းဆီက…
နှင်းဆီကုန်း ဘိုးဘွားရိပ်သာမှာ မင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုရင်..
နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာမှာ ဧည့်ခံပွဲကျင်းပဖို့ ခန်းမ ၃ခုရှိပါတယ်။ ဧည့်အယောက် ၄ဝဝ ဆန့်တဲ့ခန်းမကတော့ အဝင်အထွက်နဲ့ဆိုရင် ၄၅ဝ၊၅ဝဝလောက် ဧည့်ခံနိုင်ပြီး…
မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးအတွက် ရွေးချယ်စရာ နေရာများ
အင်းယားကန်ဖျားကျောင်းတုိုက် ကန်စပ်မှာ Decoration လှလှလေးပြင်ပြီး Signing ceremony လုပ်မယ်။ ရှုခင်းကောင်းကောင်းနဲ့ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေ…
မင်္ဂလာခန်းမ ရွေးချယ်ရာမှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်များ
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ရက်၊ လိုချင်တဲ့အချိန် ရနုိုင်မလား။ ခန်းမအနေအထားက ကိုယ့်ဧည့်သည်အရေအတွက်၊ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ပွဲပုံစံနဲ့ ကိုက်ညီရဲ့လား။ ခန်းမကို စိတ်ကြိုက်အလှဆင်ဖို့ ပစ္စည်းအထားအသို…
သင့် မင်္ဂလာပွဲအတွက် Wedding Planner ဘာကြောင့် ငှားသင့်တာလဲ ?
မင်္ဂလာပွဲတစ်ခု အောင်အောင်မြင်မြင် ချောချောမွေ့မွေ့ပြီးမြောက်ဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့ အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုတွေ၊ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေ၊ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မှုတွေ၊ အများကြီးနဲ့…
ဖိတ်စာရိုက်ခြင်းနှင့် ဝေခြင်းဆိုင်ရာ သိမှတ်စရာ
မင်္ဂလာမောင်နှံတွေအနေနဲ့ ဖိတ်စာရိုက်ဖို့ ပုံနှိပ်တိုက်နဲ့ ဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရမှာတွေကတော့.... ပွဲမတိုင်ခင်၂လ လောက်အလိုမှာ ဖိတ်မယ့်လူစာရင်းကိုချရေးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ…
မင်္ဂလာဆောင် အသုံးစရိတ်တွေဟာ များသောအားဖြင့် မှန်းထားထာထက် ပိုပြီးကုန်ကျတတ်ကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ကိုယ်မေ့လျော့နေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အသေးသုံးကုန်ကျစရိတ်လေးတွေ …
ရှေးမြန်မာအယူ လက်ထပ်မင်္ဂလာ အချိန်အခါရွေးနည်း
တန်ခူးလတွင် ထိမ်းမြားလျှင် ဥစ္စာပစ္စည်းပေါတတ်သည်။ ကဆုန်လတွင် ထိမ်းမြားလျှင် စီးပွားတိုးတက်မည်။ နယုန်လတွင် ထိမ်းမြားလျှင် မေတ္တာအရှည်မြဲတတ်သည်။ ဝါဆိုလတွင်…
၁။ ပုဆိုးတန်းတင် ထိမ်းမြားခြင်း သတို့သား၊ သတို့သမီးနှစ်ဦးလုံးကို လူလည်ခေါင်တွင် ကန်တော့ခံမထွက်ပဲ မိမိအိမ်မှာပင် လွတ်လပ်စွာနေလျှင် ဖိတ်ထားသောပရိတ်သတ်များ…
မင်္ဂလာဝတ်စုံ(ထိုင်မသိမ်း)ကို ငှားဝတ်မှာလား၊ ချုပ်ဝတ်မှာလား ?